Powerpoint အသုံးပွုရာမှာ လှနျစှာမှအသုံးဝငျမယျ့ အခကျြ (၈)ခကျြ
(၁) Double Click, Triple Click - Power Point အသုံးပွုတဲ့နရောမှာ စာတှရေိုကျထားတယျဆိုပါစို့။ Double Click (နှဈကွိမျအမွနျနှိပျရငျ) နှိပျရငျ စာလုံးတဈလုံးကို Selection ပေးတာ။ Triple Click (သုံးကွိမျအမွနျနှိပျရနျ) စာပုဒျတဈပုဒျကို Select ပေးတာဖွဈပါတယျ။
(၂) Ctrl+Shift - အရာဝတ်ထုတဈခု၊ စာတပုဒျကို Select လုပျထားမယျ။ ပွီးတော့ Ctrl+Shift တှဲပွီး Drag ဆှဲပွီးနှိပျရငျ ရပွေငျညီအတိုငျး (အထကျအောကျ၊ ဘေးတိုကျအတိုငျး) copy ကူးတာဖွဈပါတယျ။
(၃) Ctrl+D - အရာဝတ်ထုတဈခု၊ စာတဈပုဒျကို Select လုပျထားမယျ။ Ctrl+D ကိုနှိပျရငျ ထိုအရာဝတ်ထု (သို့) စာပုဒျကို copy ကူးတာဖွဈပါတယျ။
ပထမတဈကွိမျ Ctrl+D နှိပျလိုကျရငျ Copy ကူးတဲ့ object ရဲ့ အနီးမှာ ကိုယျ copy ကူးလိုကျတဲ့အရာဝတ်ထုက ပျေါလာမှာပါ။ အဲ့ဒီ့ Object (အရာဝတ်ထု)ကို ကိုယျလိုခငျြတဲ့အကှာအဝေးမှာနရောခြ၊ နောကျတဈခါ Ctrl+D နှိပျလိုကျရငျတော့ အကှာအဝေး တူညီစှာ Copy ကူးပေးမှာဖွဈပါတယျ။
(၄) Autocorrect Function - စာရိုကျတဲ့အခါမှာ Autocorrect ကို အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ ကိုယျစာရိုကျတဲ့နရောမှာ ထပျတလဲလဲပါမယျ့ စကားလုံး ပါဝငျနတေယျဆိုပါစို့။ e.g. “Thuwunna Football Stadium” ဆိုတဲ့စာလုံးကို ခဏခဏ ရိုကျဖို့လို့ရှိနတေယျဆိုရငျ အမွနျဆုံးရိုကျလို့ရတဲ့နညျးလေးကတော့ Autocorrect option ပဲဖွဈပါတယျ။
ပထမဆုံးအနနေဲ့ “Thuwunna Football Stadium” ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ရိုကျပါ။ Copy ကူးပါ။ နောကျအဆငျ့တှကေတော့ File – Option – Proofing – AutoCorrect Option ကို နှိပျပါ။ Box တဈခုကလြာပါလိမျ့မယျ။ အဲ့ဒီ့ Box မှာ Replace ဆိုတဲ့နရောနဲ့ With ဆိုတဲ့နရောလေးကို တှမွေ့ငျရမှာပါ။ Replace ဆိုတဲ့အကှကျထဲမှာ e.g. TFS (ကိုယျရိုကျခငျြတဲ့ဘယျစာလုံးမဆိုရိုကျနိုငျပါတယျ၊ ဥပမာအနနေဲ့ပွောပွတာပါ) With နရောမှာ ခုနက Copy ကူးထားတဲ့ “Thuwunna Football Stadium” ကို Paste ခပြါ။ အဓိပ်ပာယျကတော့ TFS လို့ရိုကျလိုကျတာနဲ့ Thuwunna Football Stadium လို့ပျေါစခေငျြပါတယျ လို့ ဆိုလိုတာပါ။ ပွီးရငျ OK, OK ကိုနှိပျပွီး ထှကျလိုကျပါ။
ကဲ စမျးသုံးကွညျ့ရအောငျ Text Box ကို ယူပါ TFS လို့ ရိုကျပွီး Space ကိုနှိပျလိုကျပါ။ အဲ့ဒါဆိုရငျ TFS နရောမှာ Thuwunna Football Stadium လို့ပွောငျးသှားတာကို တှမွေ့ငျရမှာပါ။
(၅) Lock Drawing Mode – Insert Menu ထဲက Shape (စကျပိုငျးပုံ၊ လေးထောငျ့ပုံ၊ အသညျးပုံ . . . . . ) အစရှိတဲ့ပုံတှကေိုဆှဲတဲ့အခါ e.g. စကျပိုငျးပုံ ဆှဲခငျြရငျ Insert ထဲက Shape ထဲမှာ စကျဝိုငျးပုံကိုရှေး၊ ပွီးရငျ ကိုယျလိုခငျြတဲ့ အရှယျအစားအတိုငျးဆှဲ၊ နောကျထပျ စကျဝိုငျးပုံ တဈခုထပျဆှဲခငျြတယျဆိုရငျလညျး ထိုနညျး၎င်းငျးပဲ နောကျတဈကွိမျ Insert – Shape - စကျဝိုငျးကိုရှေးပွီး နောကျတဈခါပွနျဆှဲ . . . . . အဲ့ဒီလို ဆှဲဖို့လိုပါတယျ။ အဲ့ဒီ့အဆငျ့တှကေို ထပျတလဲလဲ မဖွတျသနျးရဘဲ ကိုယျအလိုရှိသလောကျ စကျဝိုငျးပုံတှကေို ဆကျတိုကျဆှဲခငျြတယျဆိုရငျတော့ Lock Drawing Mode ကို အသုံးပွုရမှာပါ။
ဘယျလိုအသုံးပွုရမလဲဆိုရငျ - ပထမအဆငျ့အနနေဲ့ Insert Menu – Shape ထဲက ကိုယျလိုခငျြတဲ့ပုံစံ (ဥပမာ - စကျဝိုငျး)ပုံပျေါမှာ Right Click လုပျပါ။ Lock Drawing Mode ကို ရှေးပါ။ ပွီးရငျတော့ ကိုယျအလိုရှိသလောကျ စကျဝိုငျးပုံကို ဆှဲနိုငျပွီပဲဖွဈပါတယျ။ ဆှဲလို့ပွီးသှားပွီဆိုရငျတော့ Insert Menu – Shape ထဲက ကိုယျရှေးထားတဲ့ပုံ (စကျဝိုငျး)ပျေါမှာ Right Click – Lock Drawing Mode ကို ပွနျရှေးပေးပါ။ စမျးသုံးကွညျ့ပွီး အဆငျမပွတောတဈခုခုရှိရငျ Chat Box ကတဆငျ့ မေးမွနျးနိုငျပါတယျ။
(၆) Quick Access Toolbar - ဥပမာ ကိုယျက Chart အမွဲဆှဲနရေတဲ့သူတဈယောကျ၊ ဒါမှမဟုတျ Spelling Check ကို အမွဲလုပျလိုတဲ့လူတဈယောကျ ဆိုပါစို့။ chart ဆှဲတဲ့သူတဈယောကျဆိုရငျ Insert ထဲက Chart ကို အမွဲသှားရှေးနဖေို့ လိုနပေါလိမျ့မယျ။ Spelling Check (စာလုံးပေါငျး စဈခငျြတဲ့သူဆိုရငျလညျး) Review ထဲက Spelling ကို အမွဲ သှားရှေးနရေမှာပါ။ အဲ့ဒီလိုမဟုတျဘဲ အပျေါဆုံးမှာရှိတဲ့ bar ပျေါမှာ ကိုယျအလိုရှိတဲ့ Tool တှကေို အလှယျတကူ တငျထားလို့ရပါတယျ။ e.g. Chart ကို Top Bar ပျေါမှာ တငျထားခငျြရငျ Insert – Chart ကိုသှား Right Click ကို နှိပျ - Quick Access Toolbar ကိုရှေး၊ အဲ့ဒါဆိုရငျတော့ Chart ရဲ့ short cut icon လေးက Top Bar ပျေါမှာ ပျေါနမှောဖွဈတဲ့အတှကျ အခြိနျတိုငျး အလှယျတကူ အသုံးပွုနိုငျမှာပါ။ အသုံးမလိုတော့လို့ ပွနျဖကျြခငျြတယျဆိုရငျလညျး Chart Icon လေးကို Right Click နှိပျ Remove from quick access toolbar ကို ရှေးလိုကျရုံပါပဲ။
(၇) Tell me what you want to do (Alt+Q) - ကိုယျအသုံးပွုခငျြတဲ့ Function က ဘယျမှာရှိလဲမသိဘူးဆိုရငျ tell me what you want to do (Shortcut အနနေဲ့ Alt+Q) ကိုနှိပျလိုကျပါ။ ကိုယျရှာခငျြတဲ့ Function ကို ရိုကျထညျ့လိုကျပါ။ e.g. Header and Footer (or) Chart . . . . ကိုယျရှာခငျြတဲ့ Function ကို အလှယျတကူ ရိုကျထညျ့ပွီး ရှာဖှနေိုငျပါတယျ။
(၈) Ctrl+Tab - ကိုယျက Powerpoint window တှကေို တဈခုမက ဖှငျ့ထားတယျဆိုရငျ Ctrl+Tab ကိုနှိပျခွငျးအားဖွငျ့ powerpoint window တဈခုနဲ့တဈခုအကွား အလှယျတကူ ကူးပွောငျးနိုငျမှာပဲဖွဈပါတယျ။
အခုသငျခနျးစာကို ဒီလောကျနဲ့ပဲ ရပျလိုကျပါတော့မယျ။ အခုပွောပွထားတဲ့ အခကျြအလကျတှကေို အသုံးပွုကွညျ့လို့ အဆငျမပွတေဈခုခုမြားရှိခဲ့ရငျ Comment (or) Messenger မှ တဆငျ့ မေးမွနျးနိုငျပါတယျ။
Powerpoint အသုံးပြုရာမှာ လွန်စွာမှအသုံးဝင်မယ့် အချက် (၈)ချက်
(၁) Double Click, Triple Click - Power Point အသုံးပြုတဲ့နေရာမှာ စာတွေရိုက်ထားတယ်ဆိုပါစို့။ Double Click (နှစ်ကြိမ်အမြန်နှိပ်ရင်) နှိပ်ရင် စာလုံးတစ်လုံးကို Selection ပေးတာ။ Triple Click (သုံးကြိမ်အမြန်နှိပ်ရန်) စာပုဒ်တစ်ပုဒ်ကို Select ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
(၂) Ctrl+Shift - အရာဝတ္ထုတစ်ခု၊ စာတပုဒ်ကို Select လုပ်ထားမယ်။ ပြီးတော့ Ctrl+Shift တွဲပြီး Drag ဆွဲပြီးနှိပ်ရင် ရေပြင်ညီအတိုင်း (အထက်အောက်၊ ဘေးတိုက်အတိုင်း) copy ကူးတာဖြစ်ပါတယ်။
(၃) Ctrl+D - အရာဝတ္ထုတစ်ခု၊ စာတစ်ပုဒ်ကို Select လုပ်ထားမယ်။ Ctrl+D ကိုနှိပ်ရင် ထိုအရာဝတ္ထု (သို့) စာပုဒ်ကို copy ကူးတာဖြစ်ပါတယ်။
ပထမတစ်ကြိမ် Ctrl+D နှိပ်လိုက်ရင် Copy ကူးတဲ့ object ရဲ့ အနီးမှာ ကိုယ် copy ကူးလိုက်တဲ့အရာဝတ္ထုက ပေါ်လာမှာပါ။ အဲ့ဒီ့ Object (အရာဝတ္ထု)ကို ကိုယ်လိုချင်တဲ့အကွာအဝေးမှာနေရာချ၊ နောက်တစ်ခါ Ctrl+D နှိပ်လိုက်ရင်တော့ အကွာအဝေး တူညီစွာ Copy ကူးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၄) Autocorrect Function - စာရိုက်တဲ့အခါမှာ Autocorrect ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်စာရိုက်တဲ့နေရာမှာ ထပ်တလဲလဲပါမယ့် စကားလုံး ပါဝင်နေတယ်ဆိုပါစို့။ e.g. “Thuwunna Football Stadium” ဆိုတဲ့စာလုံးကို ခဏခဏ ရိုက်ဖို့လို့ရှိနေတယ်ဆိုရင် အမြန်ဆုံးရိုက်လို့ရတဲ့နည်းလေးကတော့ Autocorrect option ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ “Thuwunna Football Stadium” ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ရိုက်ပါ။ Copy ကူးပါ။ နောက်အဆင့်တွေကတော့ File – Option – Proofing – AutoCorrect Option ကို နှိပ်ပါ။ Box တစ်ခုကျလာပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီ့ Box မှာ Replace ဆိုတဲ့နေရာနဲ့ With ဆိုတဲ့နေရာလေးကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။ Replace ဆိုတဲ့အကွက်ထဲမှာ e.g. TFS (ကိုယ်ရိုက်ချင်တဲ့ဘယ်စာလုံးမဆိုရိုက်နိုင်ပါတယ်၊ ဥပမာအနေနဲ့ပြောပြတာပါ) With နေရာမှာ ခုနက Copy ကူးထားတဲ့ “Thuwunna Football Stadium” ကို Paste ချပါ။ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ TFS လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ Thuwunna Football Stadium လို့ပေါ်စေချင်ပါတယ် လို့ ဆိုလိုတာပါ။ ပြီးရင် OK, OK ကိုနှိပ်ပြီး ထွက်လိုက်ပါ။
ကဲ စမ်းသုံးကြည့်ရအောင် Text Box ကို ယူပါ TFS လို့ ရိုက်ပြီး Space ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ အဲ့ဒါဆိုရင် TFS နေရာမှာ Thuwunna Football Stadium လို့ပြောင်းသွားတာကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။
(၅) Lock Drawing Mode – Insert Menu ထဲက Shape (စက်ပိုင်းပုံ၊ လေးထောင့်ပုံ၊ အသည်းပုံ . . . . . ) အစရှိတဲ့ပုံတွေကိုဆွဲတဲ့အခါ e.g. စက်ပိုင်းပုံ ဆွဲချင်ရင် Insert ထဲက Shape ထဲမှာ စက်ဝိုင်းပုံကိုရွေး၊ ပြီးရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အရွယ်အစားအတိုင်းဆွဲ၊ နောက်ထပ် စက်ဝိုင်းပုံ တစ်ခုထပ်ဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ထိုနည်း၎င်းပဲ နောက်တစ်ကြိမ် Insert – Shape - စက်ဝိုင်းကိုရွေးပြီး နောက်တစ်ခါပြန်ဆွဲ . . . . . အဲ့ဒီလို ဆွဲဖို့လိုပါတယ်။ အဲ့ဒီ့အဆင့်တွေကို ထပ်တလဲလဲ မဖြတ်သန်းရဘဲ ကိုယ်အလိုရှိသလောက် စက်ဝိုင်းပုံတွေကို ဆက်တိုက်ဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Lock Drawing Mode ကို အသုံးပြုရမှာပါ။
ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုရင် - ပထမအဆင့်အနေနဲ့ Insert Menu – Shape ထဲက ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံစံ (ဥပမာ - စက်ဝိုင်း)ပုံပေါ်မှာ Right Click လုပ်ပါ။ Lock Drawing Mode ကို ရွေးပါ။ ပြီးရင်တော့ ကိုယ်အလိုရှိသလောက် စက်ဝိုင်းပုံကို ဆွဲနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆွဲလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Insert Menu – Shape ထဲက ကိုယ်ရွေးထားတဲ့ပုံ (စက်ဝိုင်း)ပေါ်မှာ Right Click –Lock Drawing Mode ကို ပြန်ရွေးပေးပါ။ စမ်းသုံးကြည့်ပြီး အဆင်မပြေတာတစ်ခုခုရှိရင် Chat Box ကတဆင့် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
(၆) Quick Access Toolbar - ဥပမာ ကိုယ်က Chart အမြဲဆွဲနေရတဲ့သူတစ်ယောက်၊ ဒါမှမဟုတ် Spelling Check ကို အမြဲလုပ်လိုတဲ့လူတစ်ယောက် ဆိုပါစို့။ chart ဆွဲတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုရင် Insert ထဲက Chart ကို အမြဲသွားရွေးနေဖို့ လိုနေပါလိမ့်မယ်။ Spelling Check (စာလုံးပေါင်း စစ်ချင်တဲ့သူဆိုရင်လည်း) Review ထဲက Spelling ကို အမြဲ သွားရွေးနေရမှာပါ။ အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ bar ပေါ်မှာ ကိုယ်အလိုရှိတဲ့ Tool တွေကို အလွယ်တကူ တင်ထားလို့ရပါတယ်။ e.g. Chart ကို Top Bar ပေါ်မှာ တင်ထားချင်ရင် Insert – Chart ကိုသွား Right Click ကို နှိပ် - Quick Access Toolbar ကိုရွေး၊ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ Chart ရဲ့ short cut icon လေးက Top Bar ပေါ်မှာ ပေါ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အချိန်တိုင်း အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ အသုံးမလိုတော့လို့ ပြန်ဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း Chart Icon လေးကို Right Click နှိပ် Remove from quick access toolbar ကို ရွေးလိုက်ရုံပါပဲ။
(၇) Tell me what you want to do (Alt+Q) - ကိုယ်အသုံးပြုချင်တဲ့ Function က ဘယ်မှာရှိလဲမသိဘူးဆိုရင် tell me what you want to do (Shortcut အနေနဲ့ Alt+Q) ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ကိုယ်ရှာချင်တဲ့ Function ကို ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ e.g. Header and Footer (or) Chart . . . . ကိုယ်ရှာချင်တဲ့ Function ကို အလွယ်တကူ ရိုက်ထည့်ပြီး ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
(၈) Ctrl+Tab - ကိုယ်က Powerpoint window တွေကို တစ်ခုမက ဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင် Ctrl+Tab ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် powerpoint window တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြား အလွယ်တကူ ကူးပြောင်းနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုသင်ခန်းစာကို ဒီလောက်နဲ့ပဲ ရပ်လိုက်ပါတော့မယ်။ အခုပြောပြထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကို အသုံးပြုကြည့်လို့ အဆင်မပြေတစ်ခုခုများရှိခဲ့ရင် Comment (or) Messenger မှ တဆင့် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
ပြျောရှငျလလေ့ာ Idiom ကမ်ဘာ
မွနျမာနိုငျငံ၏ ဘဏ်ဍာရေးကဏ်ဍ နှငျ့ ငှကွေေးစီမံခနျ့ခှဲမှု တို့ကို အရှိနျအဟုနျမွှငျ့တငျနိုငျရနျ Financial Literacy Festival အစီအစဉျ မိတျဆကျ
Financial Literacy Online Learning Festival ငှကွေေးဆိုငျရာပညာရပျတှကေို အခမဲ့လလေ့ာနိုငျမယျ့ အှနျလိုငျး ရကျသတ်တပတျ သငျတနျး
ကိုရီးယား သဒ္ဒါ (ဆရာမ ဒေါ်မြင့်မြင့်မော်)